Fatịlaịza Spreader Suppliers na Factory - China Fatịlaịza Spreader Manufacturers
Onye na-agbasasị fatịlaịza na-akọ ugbo
Product Ihe Centrifugal diski fatịlaịza na-agbasa bụ tumadi kewara n'ime otu diski na ụdị diski abụọ. The diski fatịlaịza na-agbasa bụ tumadi ekewetde ogbe, nkwusioru ngwaọrụ, ịwụ ụdị fatịlaịza igbe, fatịlaịza ihapu ukpụhọde ngwaọrụ, fatịlaịza na-agbasa efere na fatịlaịza na-agbasa na-akwọ ụgbọala ngwaọrụ, dị ka e gosiri na ọgụgụ 1. Fatịlaịza igbe arụnyere na elu akụkụ nke igwe Eku, na a tinye nri fatịlaịza na ala nke igbe fatịlaịza, na a fer ...
Ngwaahịa fatịlaịza fatịlaịza na-enweghị ike bụ ngwa ọrụ na-agbasa fatịlaịza ala, nke traktị nwere ogige dọkpụrụ karịa 15 horsepower ma ọ bụ traktọ 18 + HP. Ọ kachasị tumadi ịgbanye fatịlaịza na obere mpaghara. Obere nsị nri na-agbasa fatịlaịza kemịkal, nnu, pebbles, waviness, ahịhịa, na nri ala, na ihe ndị ọzọ. Nka na ụzụ nkọwapụta ikike 16in³ / 0.453m³ ikike 28in³ / 0.793m³ N'ozuzu akụkụ 114 * 46.5 * 30.5in / 2895 * 1181 * 775m ...
Multifunctional Fatịlaịza Truck
Product Ihe DFC usoro fatịlaịza spreader na-bụ-eji nke na-agbasa isi fatịlaịza tupu tillage, agha mgbe tillage na ahịhịa. A rụrụ ọrụ nke fatịlaịza mkpụrụ na-agbasa. Igwe ahụ nwere njirimara nke kọmpat, ọtụtụ ngwa, arụmọrụ dị elu na ọbụna ịgha mkpụrụ, nke dị mma maka iji nnukwu ugbo, ala ahịhịa na ahịhịa. Companylọ ọrụ anyị na-emepe ma na-echekwa ụdị nsị nsị a iji gboo ọtụtụ ndị ọrụ ...